Nhau - Locsmith maturusi-9in1 HUK auto lockpick
Poshi; Auto lockpick 9in1 yekuvhura musimboti; (yakapfava uye yakaoma)
Mune dzidziso, yega yega yekukiya chidimbu chinoda kumanikidzwa (dzimwe nguva chinozovhurwa kana chisina kudzvanywa, zvinonyanya kukonzerwa nekujeka kwekugadzira)
Paunonongedza iyo firimu pamwe nekubatana kweiyo fiber optic mwenje, shandisa dial yacho kuyedza. Iyo firimu inodzvanywa kana yakaoma, uye iyo firimu haizodzvanywa kana iri yakasununguka. (Kwete kusuduruka zvinoreva kuti cleat iri pasi pesimba, kufamba zvinoreva kuti cleat haisi pasi pesimba)
Mukuita kwekuvhura, isu tinongoda kumanikidza iyo inotakura-inokiya chidimbu kuti tiwane yakapfava uye yakaoma (tsvaga iyo yakaoma kubva pakati pezvizhinji zvekuvhara zvidimbu wobva wadzvanya)
Piri; maitiro ekushandira pamwe nesarudzo yekushandisa,
1 Flat azvikuya;
A. Mamwe mafirimu haakwanise kucherechedzwa zvakajeka panguva imwechete, uye zvinonetsa kudzvanya. Iwo anowanzo kuve akapetwa-akasimba makiyi. Wobva washandisa tsono yakatwasuka kuyedza zvinyoro uye kuenzanisa makumi maviri nemaviri. Kunyanya kana iyo yazvino iri yeiyo yepamusoro firimu uye yechipiri ndeyeyepasi firimu kana kukiya kukiyinurwa (semuenzaniso, kana chikamu chepamberi cheNSN14 chiri cheNha. 4 chidimbu uye chidimbu chinotevera ndicho chidimbu chekutanga. ), tsono yakatwasuka inonetsa kunongedza panguva ino, saka unofanirwa kuenda ne45 kunongedza. Inoenderana cleat
(Kunyanya iwe kupinda mukati, ndiko kunonyanya kuoma kucherechedza) Iyo chaiyo nzira ndeyekutanga kutambanudza tsono yakatwasuka kusvika mukati-kati, dzvanya pasi zvidimbu zvese, uye wozononoka kuburitsa tsono yakatwasuka, kuti iwe ugone kutarisa kureba kwechikamu chakakiiwa uye huwandu hwezvimedu (kwete Ita shuwa kuti iwe unogona zvakare kuvimba neruzha rweyakavhara ndiro yekuteerera) nzwisisa.
B, kune zvakare kwakasarudzika gorosi yekugaya (ToY43 uye TOY43AT) nekuda kwehunhu hwehunhu hwekiyi, ini pachangu ndinofunga kuti inofanirwa kuenzaniswa neNo. 67
TOY43 maficha (kamura chidimbu chakazara kuita maviri uye wochimisa mune imwechete yekukiya slot - chidimbu, zvinonetsa kudzvanya zvidimbu panguva imwechete neiyo tsono yakatwasuka kana 45 o'clock)
TOY43AT maficha, (iyo yekukiya ndiro iri muchimiro che trapezoid, uye kune anti-switching rib mukati mekiyi, iyo inotadzisa chishandiso kupinda, izvo zvinowedzera kuoma)
Panguva ino, ndinofunga zvakanakisa kushandisa iro rekuwedzera divi reNhamba 67 kumanikidza zvidimbu kana kudzivirira mbabvu dzinorwisa-kuruka kuti ikurumidze nguva yekuvhura.
2 Vhura iyo yemukati yekugaya mota yekukiya senge (HU66 HU100 HU92 ,,,)
Pasi pekuvhenekerwa kwemwenje wekusimbisa, isu tinokwanisa kunyatsocherechedza mazhinji eplate mahwendefa, uye isu tinogona kungoona chete kuona simba remakaki mahwendefa.
Kana firimu ikaramba ichimanikidzwa, pane mikana miviri.
A, Bo Tsai akagutsurira firimu zvakanyanya. Panguva ino, iyo giya Y inoda kurerutswa zvishoma. Kuti tidzivirire mamwe maratidziro kubva pakusvetuka kumusoro, isu tinoedza kudzoreredza macleats zvakanyanya sezvinobvira.
B, ndiro yekukiya haisati yaburitswa parizvino (ramba uchidzvanya kukiya ndiro)
3 Vhura zvokunze azvikuya motokari zvechizarira akadai (HU101 HHU64)
Chikamu chinonetsa kwazvo cherudzi urwu rwechivharo kutya kutya-kubaya-bhatisa chidimbu chekiyi (bhatani rekukiya harigone kudzoserwa senge yekugaya yemukati), saka unofanirwa kutarisisa kana uchivhura iyi mhando yekiyi
A; Chengetedza chinhambwe chinofambiswa naPozi nguva imwe neimwe kuti usamanikidze kumanikidza kuri padhuze
B; Simba rekutsimbirira chidimbu chekiyi rinofanirwa kuiswa zvishoma nezvishoma kudzivirira icho chikamu chakakiiwa
C; Kana chete zvidimbu zvekupedzisira nehafu zvasimbiswa, edza kubatana neNo. 89 kudzvanya kuti zvidzivise chishandiso
Aya mazano ari pamusoro apa ndeaya:
Flat milling car lock 1. 2.4.5 Yemukati yekugaya 1.3.8.9 External chigayo; 1.3.8.9
Pamusoro pezvo, Nha. 2 (vhura chimiro chepamusoro nechepazasi, donhwe harifanirwe kunge rakanyanya kukura uye mana ekunze. Zviri nani kukuya gomba diki kumusoro nekumativi ekudzivirira kutsvedza kana chip chadzvanywa. ine chishamiso chinokonzeresa chekare cheMercedes-Benz HU39, BMW, HU58, Volvo, NE66 nekuti makiyi aya anowedzerwa muchirimo. Crude)
Tatu; mashandisiro aungaita Y faira nenzira kwayo
Mukuita kwekuvhura uye kuwedzera simba, iyo giya rinoshandiswa zvishoma nezvishoma. Usawedzere kusvika kumagumo. Izvi zvinokonzeresa kuti ndiro yekukiya ive yakasimba uye inonetsa kutanga kukiya ndiro. Kana iyo yekukiya ndiro yakamanikidzwa nechisimba, chishandiso chinogona kukuvara uye ndiro yekukiya ingadzvanywa.
Kana iyo bhaisikopo ikadzvanywa uye ichida kutambiswa kumashure, iyo yekutamba maitiro zvakare inononoka. Zvikasadaro, mamwe emaraki akasunungurwa anodonha. Naizvozvo, kunyangwe yakavhurwa kana kuridzwa kumashure, inoitwa zvishoma nezvishoma. Iyo firimu painosvika pakona chaipo, iyo firimu ichaita zvakasununguka Ichaparadzaniswa.
Aya mazwi ezvinyorwa anotevera akavakirwa pamufananidzo uri pamusoro semuenzaniso;
Kwete. 1; tsono yakatwasuka (inogona kukurumidza kuvhura chero musuwo wemotokari isiri yepamberi mbiru, fungidziro ndeyekuti donhwe harifanirwe kunge rakanyanya kukura. Kana donhwe racho rakanyanya kukura, kubatana kwemaoko ese kwakavanzika uye nzira yekuvhura inoshandiswa kuwedzera nguva yekuvhura)
Nha. 2; yakakomberedza musoro (vhura iyo yepamusoro uye yepasi dhizaini, donhwe harifanirwe kunge rakanyanya kukura uye mana ekunze, zvakanakisa kukuya gomba diki kumusoro uye kwakadzika mativi kudzivirira kudzivirira kutsvedza kana chip chikaonekwa. Ine chishamiso chiitiko kune yekare Mercedes-Benz HU39, BMW HU58, Volvo NE66 nekuti izvi zvinokiya pachavo Chitubu chakashinga)
Nha. 3; Foshoro (vhura marudzi ese emukati nekunze ekuvharira akadai seMercedes-Benz neBMW, kusanganisira yekare Mercedes-Benz neBMW (zvinokurudzirwa kushandisa foshoro mukutanga nhanho kuchinjira kuNo. 2 mune inotevera nhanho) TOY2 Toyota yemukati yekugaya maturu maviri haigone kuvhurwa nefoshoro (iyo nzvimbo ishoma kwazvo, inowanikwa Nha. 1 yakakombama kuti ivhure), BYD akateedzana TOY2 inogona kuvhurwa nefoshoro!
45; Horseshoe (imwe yepamusoro uye yepasi, iine Nha. 1 yekuvhurwa kwechimiro uye donhwe hombe, kwete. 1 ne2 zvinogona kushandiswa kana donhwe iri diki, kana donhwe riri diki, shandisa Nha. 45, zvinova zvinonetsa zvishoma. Zvishandiso zvinogona kwete kufamba mukati, kunyanya kukiya Kana mativi ekumusoro neepasi emuromo rimwe nerimwe riine firimu)
67; pamwe nedivi rehashe (inogona kutaurwa kuve kumusoro uye pasi kana inogona kunzi yakadzika kuruboshwe nekumusoro kurudyi, neyekutanga kuvhura inobatsira TOY43AT nhevedzano yekukiya uye TOY43 kukiya Nha. 4, 7 zvidimbu (mahafu maviri akafanana kiya slot) pamwechete (kudzivirira kungobaya Kusvikira hafu yekiyi kiyi)
89; Half-side foshoro (kubatsira mukuvhura kuruboshwe uye kurudyi mativi ekiyi, asi zvakare diki kiyi (senge HU64 HU101) pakavharwa nekukurumidza, mubatsiri wakanaka wekuwedzera simba)
Pfupiso: Kana chishandiso chikashandiswa nemwenje wefaera, chinogona kuvhura chero musuwo wemotokari isiri mbiru yepadivi. Maitiro ekuvhura anoda kubatana kwemaoko ese. Usamanikidze zvine simba
Post nguva: Zvita-23-2020